I-P4.81 yangaphandle ye-Panel yokubonisa yeShishini ngeRente
Ukusetyenziswa kwesakhiwo esikhethekileyo sokusasaza ubushushu kwenza ukusasazeka kobushushu okugqwesileyo, ukusebenza okuzolileyo ngaphandle kwamafeni.Ukuhlaziya okuphezulu / umahluko ophakamileyo / umbala omnyama / umfanekiso oqaqambileyo obonisa i-engile yokubukela ebanzi ikunika eyona ndawo inkulu yokubukela isikrini. ukuthuthwa, ukucaba okuhle kunye nokungenamthungo
Ukuqeshisa kwe-LED kubonisa ukulinganiswa kwamanzi okufikelela kwi-IP65
Isetyenziselwa ikakhulu i-pcrfonnance, iintlanganiso, imiboniso, ukhula, isiseko, ukuqala ukuvulwa, ukukhuthazwa kunye neminye imisebenzi, amanqwanqwa angasemva. izibane nezixhobo zesandi kunye neendawo ezizodwa zokuqeshisa izixhobo. Umbala obanzi weGamut
Ukutshatyalaliswa kobushushu bentsimbi
Inqanaba lokuhlaziya kwakhona eliphezulu
Ubunzima bokuKhanya kunye nokuHamba
Ukukhanya okuphezulu kobugcisa Uyilo lwesakhelo esimxinwa, ubukhulu bekhabethe yi-80nun kuphela, ukuthwala ngokulula kunye nekhabhathi elula kuphela ye-13kg, kulula ukwenza i-lnstall kunye neendleko zothutho zokugcina.
nkqo 150, tyaba 120 ukubonwa okubonakalayo, yenza ukuba isikrini sakho sinendawo enkulu yokubukela inokufumana ulwazi oluphezulu nokuba ngowuphi umkhombandlela.
Ukuhlaziya okuphezulu / Umahluko omkhulu unokufikelela kwi-16.
Ndikunike iimvakalelo zokubukela ezimibalabala
Ukuhlaziya okuphezulu kwe-3840Hz
Umahluko ophakamileyo 4000: 1
1. ukujikajika engenan-, zilungiswe, kulula ngakumbi ukugcina.
2. Ingxolo ephantsi, ukusetyenziswa kancinci, ukuqinisekisa ixesha elide lokuphila.
3. Iphaneli yokuphosa i-aluminium yokusasaza okukhulu inokugcina iindleko zakho zombane kakhulu.
4. Umgangatho ophezulu we-chip ye-LED, i-angle ebukeleyo yokubukela, i-flatness efanelekileyo, i-anti-static, ukukhanya okuphezulu, ukuthintela okuphantsi, ukuzinza okuhle.
5.Yamkela ubungakanani bekhabhathi engama-500x1000mm, ufakelo olukhawulezayo, umboniso ocacileyo wemifanekiso ekwi-engile ebanzi yokujonga. Iindidi zemowudi yokubonisa, kulula ukusebenza.
6.Umgangatho wekhabhinethi yoyilo, ukwenza ubungakanani bekhabhinethi obufanayo bunokufaka isicelo kumboniso we-pixel eyahlukeneyo.Ngoko ke, kulula ngakumbi ukufaka kunye nokudiliza iscreen sonke. Uyilo lwekhabhathi engasindi, gcina iindleko zothutho.
7. Kananjalo ungenza nge-P3.9 yangaphakathi, i-P3.9 ngaphandle, i-P4.81 yokuboniswa kwangaphandle kwe-LED.
Ngokungafaniyo neenkampani ezininzi, thina kwi-Everyinled silapha ukuze siqiniseke ukuba iziboniso zakho ziyagutyungelwa xa uzifuna kakhulu. Sigubungela iiphaneli zethu ukusuka kumda ukuya emphethweni, ipikseli ukuya kwi-pixel kubandakanya yonke imiba yeetayile zakho ze-LED. I-LED nganye inikezela zonke iimveliso zethu kangangesithuba seminyaka emi-3. emi-5 ukuya kumthengi wokuqala, ukuba angabinasiphene ekusebenzeni nakwizixhobo eziphantsi kokusetyenziswa kwesiqhelo njengoko bekucwangcisiwe yi-Everyinled ngalo lonke ixesha lewaranti.
P5.95 Imveliso yangaphandle ye-audiovisual LED screen ...
P8.925 Ngaphandle kweFlexible LED yeVidiyo yeVidiyo yeMoto ...
Iscreen se-P8 esivulekileyo soMoya esiKhanyayo seMidlalo
P3.91 Ukurenta ngaphandle kwe-LED udonga lwevidiyo
I-P3.9 Alquiler Evento Imveliso yangaphakathi yevidiyo ...